Amisom | Voice Of Somalia
DHAGEYSO:- Ilka Xanaf: “Al-Shabaab Kama Adkaan Karno Waxay Adeegsanayaan Guerrilla Fighting”
Posted on March 30, 2015 by Voice Of Somalia Standard
Caydiid Cabdullaahi Ilka Xanaf gudoomiyaha Maxkamadda Sare ee dowladda ayaa isagoo ka hadlayay weerarkii ballaarnaa ee hotel Maka Al-mukarrama shaaciyay iney ku adag tahay iney u babac dhigaan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab sababo uu ku sheegay xeeladda dagaal ee ay adeegsanayaan oo halis ah.
Wuxuu sheegay in dagaalkoodu yahay mid aan la ogeyn xilliga ay soo qaadayaan, goobta ay ku qaadayaan iyo sida ay u qaadayaan taasna ay keeneyso in mar walba ay dhacaan weeraro waaweyn sida kii jimcihii iyo sabtidii galinkii hore ka socda Muqdisho.
Sidoo kale waxa uu si cad u sheegay in dowladda looga sarreeyo dhanka sir doonka iyo ka daba tagga dhacdooyinka ama weerarada dowladda loo geysto. Ugu dambeyntii waxaa wax laga weydiiyay sida ay xaaladiisu tahay iyo halka uu ku dambeeyo Maxamad Cumar Carte ra’iisulwasaare ku xigeen ku dhaawacmay weerarkii hotel Centeral.
DHAGEYSO:-Warbixin Ka Hadlaysa Ciidamada Dowladda oo Bilaabay inay La Goostaan Gawaarida Dagaalka.
Posted on February 10, 2015 by Voice Of Somalia Standard
Niyad jabka heysta Maleeshiyaadka Dowladda ayaa dhaliyay inay ka baxsadaan Sufuufta ciidamada Dowladda Federaalka.
Ciidamada ayaa ka cabanaya Daryeel La’aan iyo Welwel ka haysta bad qabka Noloshooda, maadaama har iyo habeen ay lakulmaan weeraro joogto ah oo kaga yimaada shabaabul Mujaahidiin.
Gobalka Shabeelaha Hoose ayaa kamid ah Gobalada ay iska dhiibaan Ciidamada Dowladda Federaalka.
Gobalkaan Wuxuu wilaayaadka kala mid yahay askarta ka goosta Dowladda Federaalka Balse waayadaan danbe waxaa udheeraa Gobalka Ciidamo Gawaari dagaal wata oo isku dhiibay wilaayada shabeelaha Hoose.
Gawaari Cusub oo loo qeybiyay Maleeshiyaadka ayay la baxsadeen Taasi oo ay ka argagaxeen shisheeyaha bixiyay Gawaaridaasi.
Hadaba Warbixin dheer oo arimahaasi faafaahineysa hoos ka dhageyso.
Halkan Guji oo Dhageyso Warbixinta.
Posted on January 17, 2015 by Voice Of Somalia Standard
Dagaal Ooge Axmed Madoobe iyo ku xigeenkiisi Cabdullahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa dhabarka isku jeediyay kadib dilal qorshaysan oo maleeshiyaadka Axmed Madoobe ku fuliyeen shakhsiyaad aan hubeysnayn iyo saraakiil ay qaraaba yihiin Fartaag.
Ilo wargal ah ayaa SomaliMeMo u sheegay in Fartaag uu isaga cararay magaalada Kismaayo isagoona gaaray magaalada Nairobi halkaasi oo uu askhtako ka dhan ah Axmed Madoobe geeyay.
Jeneraal Gabre taliyaha ciidanka Itoobiya ee Soomaaliya ku sugan ayaa Axmed Madoobe ku amray in uu la shaqeeyo Fartaag oo Itoobiya doonayso in ay ka dhigato wakiilkeeda Jubbooyinka,wararka ayaa intaasi ku daraya in saraakiil Kenyan iyo Itoobiyaan ah ay Axmed Madoobe iyo C/llaahi Fartaag ku kulansiiyeen magaalada Nairobi balse lama oga waxa kulankaasi kasoo baxay.
Fartaag ayaa si cad u sheegay in naftiisa uu uga baqayo maleeshiyaadka Axmed Madoobe kadib markii ay dileen saraakiishiisi gaarka aheyd waxaana si dirqi ah ku badbaaday Yaasiin Raadaar.
Siyaasiyiin diiday in magacyadooda la adeegsado ayaa sheegay in Fartaag uu shuruudo adag ku xiray la shaqeynta Axmed madoobe waxaana shuruudahaasi kamid ah
1-in maleeshiyaadka dhanka Axmed madoobe taabacsan lagasoo qaado xaafado ay Guul wade kamid tahay islamarkaana ciidan isaga beeshiisa kasoo jeedo ay wax ka sugaan ammaanka Kismaayo.
2-in la joojiyo dilalka dadka kasoo jeedo beesha Mareexaan oo joogto ka noqday Kismaayo.
3-in isaga xuriyad loosiiyo in maleeshiyaadka Goob weyn ku sugan uu maamulka kusoo daro qeybna ku lahaadaan dhaqaalaha dekadda Kismaayo.
Max’med Warsame Darwiish oo xubin ka ah maamulka Jubbaland isku magacaabay ayaa Axmed Madoobe ku cadaadiyay in uu iska fogeeyo Fartaag.
Si kastaba ha ahaatee maamulka gumeysiga la shaqeeya ee Kismaayo kajira ayaa wajahaya laba caqabadood oo kala ah dagaalka uu kula jiro Mujaahidiinta iyo loolanka dhanka beelaha ee dhaxdiisa kajira.
Itoobiya oo Dalkii loo gacan geliyey! Qore: Cabdulaahi Ibrahim Cumar.
Siyaasiyiinta Soomaalida, ayaa dalkii u gacan geliyey taliska Xabashida ee ay hormuudka u tahay Qowmiyadda Tigreeda xilli rajo laga qabay qaran Soomaaliyeed oo mid ah islamarkaana madax banaan, waana waxa ay ku saabsan tahay qormadan gaaban.
Itoobiya ayaa si dadban u la wareegtay dalkii, Iyadoo ka faa’iideysaneysa kala qeybsanaanta dadka Soomaalida ah iyo waliba waxtar-xumida Siyaasiyiintooda.
Maadaama ay labada dal u dhaxeyso colaad gaamurtay oo salka ku hayso muran xagaa dhulka ah iyo waliba cidda hurmuudka u noqoneysa Mandaqan Geeska Africa, ayaa waxa ay taasi keentay in labada dal uu midba midka kale u arko cadow ay qasab tahay in la burburiyo.waana siyaasadaa ay Itoobiya kula dhaqmeyso dalka Soomaaliya ilaa maanta.
Iyadoo ay Itoobiya ka duuleyso aragtida aan kor ku soo xusay oo ay waliba la qabto Walaasheeda, taas oo uu markii danbe cadeeyey Madaxweynihii hore ee Kenya Daniel Ara Moi sanadku markuu ahaa 2003 xilli uu khudbad ka jeedinayey Jaamacad ku taallo Dalka Maraykanka.Aragtidaas oo oroneysa Soomaaliya oo leh dowlad xoogan waxa ay qatar ku tahay jiritaanka dalalka Itoobiya iyo Kenya.
Markale Iyadoo Itoobiya ka falcelineyso, weerarkii ay Soomaaliya ku qaaday Itoobiya Sanadku markuu ahaa 1977. kaas oo ugu danbeyn keenay, in ay ciidamada Soomaalida muddo gaaban gudahood ku qabsadaan dhamaan dhulkii ay Xabashidu ka haysatay dadka Soomaalida ka dib markii loo xoogsheegtay ciidamadooda.Intii waqtigaasi ka danbeeysay, Waxa ay Dowladda Itoobiya u kabagashatay sidii ay u burburin lahayd dalka Soomaaliya wadda kastaaba ha u marto.
Dagaalkii 77 ka dib, Waxa ay Itoobiya bilowday qorshe ay ku burburineyso Soomaaliya, Iyadoo isticmaaleysa jabhado Soomaali ah. Qorshahani ayaa saldhig looga dhigay siyaasadda qeybi oo xukun,Kaas oo ugu danbeyn keenay in la rido Dowladdii markaasi jirtay.
Jabhadaha SNM,SSDF,USC iyo SPM ayaa ugu danbeyntii suurtageliyey in ay fusho riyadii ay Itoobiya ku riyoon jirtay ee ah in ay aragto Soomaaliya oo burburto, Islamarkaana lagu kala carara.
Hadaba maxaa sameysay Itoobiya markii ay dhacday Dowladdii Soomaaliyeed ? ma faraha ayey kala baxday arimaha Soomaaliya mise halkeedii ayey ka sii waday faragelintii iyo fowdadii ay waday ?
Markii ay dhacday Dowladdii Dhexe ee uu Madaxweynuhu ka ahaa Maxamed Siyaad, Waxay ay Itoobiya halkeedii ka sii waday qorshaheedii burburinta ahaa,Iyadoo sii hurineysay dagaaladii sokeeye ee dalka ka socday, sidoo kalena hubeysneysey hadba qabiilka ama Jabhadda ay u aragto in uu fulinayo maslaxddeeda si uu u sii socda dagaalka iyo burburka.
Iyadoo ka duuleysa siyaasaddeeda ka kooban labada qodob ee kala ah, in marka hore la fashiliyo iskuday kasta oo lagu doonayo in lagu dhiso dowlad Soomaliyeed oo xoogan, iyo haddii uu fashilmo iskudaygaasi, in gacanta lagu dhigo shaqsiyaadka horbooda siyaasadda Soomaaliya laga bilaabo heer degmo ilaa heer qaran, taaso oo ugu danbeyn u suurtagelineysay in ay gacanta ku hayso dowlad kasta oo la dhiso.
Hadaba si ay u xaqiijiso qodobkaasi danbe waa Itoobiye, islamarkaana aysan Soomaaliya u maamulin kooxo iyo Shaqsiyaad aan Iyada xiriir la lahayn, Waxa ay qaaday duulaamo dhowr ah oo ay kula dagaalameyso ururadaasi,Waxaana ka xusi karnaa duulaamadaasi kii ay ku qaaday Maxkamadihii Islaamiga, Iyadoo markaasi ku marmarsiineysay in ay caawineyso Dowladdii uu Madaxweynaha ka ahaa C/laahi Yuusuf.Alla muxuu taariikh madow ka tagay.
Hadaba si ay gacanta ugu dhigto maamulada dalka ka jira haday ahaan lahaayeen heer degmo,heer gobol iyo waliba heer qaran Waxa ay soo barbaarisay Siyaasiyiin Soomaali ah,kuwaas oo ugu danbeyn u suurtageliyay in ay si dadban ula wareegto dalka, Islamarkaana ay Iyadu noqoto cidda kaliya ee wax laga weydiiyo mustaqbalka Soomaaliya iyo waliba nooca dowlad ee loo dhisayo.
Hadaba su’aasha meesha taalaa waxaa weeye siyaasiyiinta Soomaalidu dalkii ma u gacan geliyeen Itoobiya mise maya ? Jawaabtu waa haa maxaa yeelay, ma jiro deegaan ku yaallo Soomaaliya oo aysan Itoobiya saameyn toos ah ku lahayn marka laga reebo inta yar ee ay gacanta ku hayso Xarakada Al-shabab.Waan ku celinayaa mar kale ma jiro deegaan ku yaalo Soomaaliya oo aysan Itoobiya si toos ah u maamulin haday ahaan lahayd Somaliland,Puntland,Jubaland,Koonfur Galbeed iyo waliba Gobolada Dhexe.
Sidaan kor ku xusayba,Waxa ay awood u leeyihiin Sirdoonka Itoobiya in ay cidda ay rabaan ka soo qabtaan dhamaan deegaanada uu ka kooban yahay dalkan marka laga reebo deegaanada ay gacanta ku hayso Xarakada Al-shabab.taasna waxaan u malaynayaa in ay ila qabaan dad badan oo Soomaaliyeed oo aan xaqiiqda ka gabaneynin.Amma beenaalayaasha iyaga ayey u taal
Bal si ay u qancaan dadka Soomaaliyeed ee jecel wanaagga dalkooda, Islamarkaana ay u ogaadaan in Siyaasiyiintooda ay dalkoodii u gacan geliyeen Xabasho, Xilli laga rajo qabay qaran Soomaaliyeed oo mid ah, islamarkaana madax banaan bal aan keeno tusaalayaal dhowr ah.
1-Waxaan maalin dhexdaasi ah la hadlay, nin ka tirsan maamul ka mid ah gobolada soomaaliya,Waxaana weydiiyey goorta la dhisayo maamulka gobalka iyo degmooyinkiisa.Waxa uuna ii sheegay ninkaasi, in la sugayo ninka Itoobiya u qaabilsan gobolkaasi marka uu yimaadana la dhisi doono maamulka gobolka.Waxaan weydiiyey aaway maamul goboleedkii la sheegayey iyo Dowladdii Federaalka ? Waxa uuna iigu jawaabay Anaga Itoobiya ayaa nalaga xugumaa, Iyada ayaana sugeynaa !!
2-Waxaa maalin dhexdaasi ka dhacday Magaalada Baydhabo,rawaayad aad u qosol badan oo ay Itoobiya ku soo bandhigtay Magaalada, ka dib markii ay si qasab ah uga dhigtay Shariif Xasan Sheekh Aadan Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed, Iyadoo ganafka ku dhufatay Maamulkii ay dhisteen dadka reer koonfur Galbeeed,taaso oo runtii ku tusineysa heerka ay gaarsiisan tahay saameynta ay Itoobiya ku leedahay dalka.
3-Itoobiya, Waxa ay dhawaan heshiis ballaaran la gashay Maamulka Somaliland xilli ay dalka ka jirto Dowlad Dhexe,Taas oo muujineyso in ay Itoobiya sameyn karto waxa ay rabo, islamarkaana ka sameyn karto gobolka ay doonto, Iyadoo xitta aysan jirin cid ku canaanatay heshiiskaasi sharcidarada ah walaa Madaxweyne walaa Xildhibaan walaa Xeer-ilaaliye Qaran.
Dhamaan qodobadii aan xusay iyo kuwa kale oo badanba, Waxa ay na tusayaan in siyaasiyiinta Soomaalida ah ay dalkii u gacan geliyeen Xabashi, taas oo runtii ah wax laga xumaado. tusaale ahaan waxaad arkaysaa mararka qaar siyaasiyiin ku doodayo in aysan suurtagal ahayn in xil sare laga qabto Soomaaliya hadaanan taageero laga haysan Itoobiya.
Waxyaabaha layaabka badan ee la sheega waxaa ka mid ah, in ay wasiiro ka yihiin Dowladda Federaalka ah rag ku xiran sirdoonka Itoobiya,Kuwaas oo gudbiya sirta Madaxda Soomaalida gaar ahaan Dowladda Federaalka.taas oo runtii ceeb iyo yaxyaxba ku ah dadka Soomaaliyeed ee taageera Dowladda Federaalka oo aan Aniguba ka mid ahay.
Waxaan runtii isweydiiyaa mararka qaar sida aan u taageeri karno siyaasiyiin noocan ah. tusaale ahaan waan yaxyaxaa markaan maqlo Gabre ayaa la isku cabsiyaa Xamar. ama Madaxda Somaliland iyo Puntland ayaa isku garbiyo taageerada Dowladda Itoobiya. taas waxaa ka daran markii ay ogolaadeen Siyaasiyiinta Soomaalida ah, in ay Itoobiya ka mid noqoto Howlagalka Amisom, Iyagoo og xasaasiyadda ay dadka Soomaaliyeed ka qabaan ciidamada Itoobiya.
Maadaam ay jirto colaad gaamurtay u dhaxeysa labada dal, Islamarkaana uu jiro dhul ay Itoobiya ka haysato Soomaaliya, Waxa ay ahayd inaanan marna la ogolaanin, in ay ciidamado Itoobiyaan ah cagta soo dhigaan ciidda Soomaaliya daruuf kasto oo jirtaba laakiin dad ay siyaasiyiin u yihiin Cabdi wali Gaas iyo wax ka mid ah xagay gaarayaan.Midda kale haddii ay sidan noqotay Tigreedii Shalay la caawiyey sow ma mudna in la isweydiiyo in la soo dhaweysan karo Amxaar qowmiyad kastaaba ha ka soo jeedee ?
Gaba gabadii, waxaa ku leeyahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ceebay idin ku tahay inaad dalkiina u gacan gelisaan dal cadow ku ah qaranimadiina.Sidee ku ogolaateen in la idinka xukumo caasimaddii Shalay laga burburiyey dalkiina ? Aaaway damiirkiinii sowse ma ogodiin in ay qormeyso taariikh oo la oran doono hebel waxa uu ahaa ninkii sidaas iyo sidaas sameeyey. Ma ogtihiin inaad isku darsateen karti-xumo,musuq maasuq,qabyaalad,dabadhilifnimo iyo waliba muran badan. Ilaahow kuwan naga qabo adaa qaadiree.
Hadda maxaa lagu tilmaami karaa Siyaasiyiinta ku shirsan Magaalada Istanbuul ee ka kala socda Dowladda Federaalka iyo Mamul Beeleedka Somaliland.Haddii ay dhab ka tahay in la wadahadlo maxaa diiday in lagu wadahadlo gudaha dalka sida Magaalooyinka Muqdisho,Hargeysa,Boosaaso iyo Baydhaba ? Dalxiis iyo tamashle iga dheh.
Maadaama ay ku fashilmeen Siyaasiyiinta Soomaalida hogaaminta dalka iyo waliba dhismaha qaran Soomaaliyeed, sidoo kalena ay dalkii u gacan geliyeen cadowgii soo jireenka ahaa hadaba waxaan u soo jeedinayaa siyaasiyiinta Soomaalida ah talooyinka soo socda :-
In aad la timaadaan aragtidii lagu dhisi lahaa qaran Soomaaliyeed oo mid ah islamarkaana Madax banaan.
Hadaydan keeni Karin aragtidaas inaad Umadda ka hor leexataan si dalka loo badbaadiyo
In aad dalka ka saartaan dhamaan ciidamadan ka soo jeeda Dowladaha Dariska ah gaar ahaan Itoobiya iyo Kenya oo runtii qatar ku ah jiritaanka qaran Soomaaliyeed oo mid ah.
Codsi: Waxaan weydiisanyaa Shacabka Soomaliyeed gaar ahaan dadka aqrin doona qormadan inaan ka helo feedback si aan u ogaado in la ila wadaago aragtida aan ka qabo Siyaasiyiinta Soomalida iyo waliba saameynta ay Itoobiya ku leedahay dalkeena.
W/Q: Cabdulaahi Ibrahim Cumar